Weghachite: Otu esi echekwa ụlọ ahịa gị na akpaghị aka ma ọ bụ Shopify Plus Store | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 9, 2021 Tọzdee, Disemba 9, 2021 Douglas Karr
N'ime izu ole na ole gara aga arụpụtala nke ọma site n'aka onye ahịa ụlọ ọrụ ejiji nke anyị na-ewepụta saịtị maka ndị ahịa ozugbo. Nke a bụ onye ahịa nke abụọ anyị nyere Shopify aka, nke mbụ bụ ọrụ nnyefe.
Anyị nyeere onye ahịa a aka iwulite na ika ụlọ ọrụ, mepụta ngwaahịa na atụmatụ ahịa ha, wuo ha Zụọ ahịa Gụnyere saịtị, jikọtara ya na ERP (A2000), agbakwunyere Klaviyo maka ozi SMS na ozi email anyị, ejikọtala deskọdụ enyemaka, mbupu na sistemụ ụtụ. Ọ bụla nnukwu ọrụ yana ọtụtụ mmepe maka njirimara omenala na saịtị ahụ niile.
Shopify bụ sistemu sara mbara, nwere atụmatụ POS, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ọbụna ịzụ ahịa mkpanaka site na ngwa ụlọ ahịa ha. N'ụzọ dị ịtụnanya, n'agbanyeghị, ọbụlagodi Shopify Plus - ngwọta ụlọ ọrụ ha - enweghị nkwado ndabere na mpaghara mgbake na akpaghị aka! Obi dị m ụtọ na enwere ikpo okwu dị ịtụnanya jikọtara ya nke ọma site na ngwa Shopify na-elekọta gị nkwado ndabere na mpaghara kwa ụbọchị… a na-akpọ ya. Weghachi.
Weghachite azụ ahịa Shopify
Ndị otu 100,000 tụkwasara ntụkwasị obi rewind ugbua na ọ bụ ọrụ nkwado ndabere maka Shopify. Atụmatụ na uru gụnyere:
Kwado Ụlọ Ahịa Gị - Kwado ihe niile, site na foto ngwaahịa n'otu n'otu ruo metadata ruo ụlọ ahịa gị niile.
Chekwaa Oge na Ego - Nkwado CSV akwụkwọ ntuziaka na-ewe oge yana mgbagwoju anya. Weghachite ndabere data gị na-akpaghị aka, na-enye nchekwa data set-ya-na-echefu-ya.
Weghachite data dị mkpa n'ime nkeji – Ekwela ka a software esemokwu, a buggy ngwa, ma ọ bụ malware rie n'ime gị ala akara. Rewind na-enye gị ohere imegharị mmejọ wee laghachi azụ ahịa ngwa ngwa.
Akụkọ ụdị n'ọnụ mkpịsị aka gị - Nọgidenụ na-akwado ma jikere nyocha. Udo nke uche site na nchekwa data echekwara na akpaaka bụ uru asọmpi gị chọrọ.
Otu esi eji azụghachi azụ azụ Shopify
Nke a bụ ntụle vidiyo nke ikpo okwu.
A na-echekwa data gị na-akpaghị aka ma zoo ya na nzuzo… nke ahụ bụ uru na ị nweghị ike itinye mkpado ọnụahịa. N'ezie, ọnụ ahịa Rewind dị ezigbo mma. Nkwụghachi ga-edobe nkwado ndabere na mpaghara, gụnyere metadata. Weghachite ihe ọ bụla site na otu onyonyo n'ụlọ ahịa gị dum - họrọ naanị ụbọchị mgbe ihe niile rụrụ, wee kụọ dịghachi!
na Weghachi, ị nwere ike họrọ ụbọchị iji weghachi isiokwu gị, blọọgụ, mkpokọta omenala, ndị ahịa, ibe, ngwaahịa, ihe oyiyi ngwaahịa, nchịkọta smart, na / ma ọ bụ isiokwu gị.
Bido Ọnwụnwa nlọghachi n'efu ụbọchị 7
Nkpughe: Anyị bụ ndị mmekọ maka Weghachi, Shopify, na Klaviyo ma na-eji njikọ njikọ anyị na akụkọ a.
Tags: ndaberendabere shopify blọọgụndabere shopify mkpokọtandabere shopify oyiyindabere shopify ngwaahịandabere shopify ụlọ ahịandabere shopify isiokwuotúotú ndabere shopifyotú ndabere shopify plusrewa azuụlọ ahịaZụọ ahịa Gụnyere